यो हो विश्व रेकर्ड राख्ने संसारको सबैभन्दा गह्रुँगो साइकल
र्जमनका एक व्यक्तिले बिग्रिएको फलाम र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने टायर प्रयोग गरी साइकल बनाएका छन् जसले विश्व किर्तिमान राखेको छ । अहिले जे पनि कुरा सानो र हल्का बनाउने होडबाजी चलिरहेका बेला यस्तो साइकल देखिनु एक अचम्मको विषय हो । विभिन्न अनलाइन र भिडियोका अनुसार जर्मनका यी व्यक्तिले १ हजार ८० केजीको साइकल बनाएर […]
बच्चाहरु जति नै साना भएपनि उनीहरु आफ्नो वरिपरिको अवस्था हेरेर स्थितीलाई राम्रोसँ..
संसारको पहिलो रेष्टुरेन्ट जहाँ निःशुल्क खान पाइन्छ
हिमाञ्चल प्रदेशको एउटा होटल आजकाल निकै चर्चित छ । गोपाल होटल एण्ड रेष्टुरेन्ट ना..
संसारको सबैभन्दा महँगो विवाहः दुलहीको गाउन ६ करोडभन्दा बढि, केक १० फिट अग्लो
रुसी अर्बपती इलखोम शोकिरोवको छोरीको विवाह संसारको सबैभन्दा महँगो विवाह साबित भएक..
युक्रेनका एक व्यक्तिले आफ्नो नाम आधिकारीक रुपमा ‘आइफोन सेभेन’ मा परिवर्तन गरेर आ..
यी महिलाका छन् २० प्रेमी र २० वटै आइफोन सेभेनः थाहा पाउनुस् उनको रोचक कहानी
चीनको लोकप्रिय ब्लगिङ साइट ‘तियान या दी दू’ मा छापिएको एक ब्लगले पूरा सोसल मिडियामा धमाका मच्चाइरहेको छ । यसमा एक छद्म नामबाट छापिएको एक ब्लग एक महिलाले आफ्नो लागि घरको बन्दोबस्त गरेको तरिकाबारे वर्णन गरिएको छ । ‘प्राउड कियाओबा’ को नामबाट उक्त ब्लग लेखिएको छ । उनी कहानीको मुख्य पात्रको सहकर्मी भएको बताउँछिन् । […]
सोसल साइट्समा चर्चित हुन कसलाई रहर नहोला । तर यदि एकसाथ हज्जारौं मानिसहरु कसैलाई प्रतिबन्ध गर्न माग गरे के होला ? आज हामी तपाईंलाई यस्तै एक महिला बारे बताउँदैछौं जसलाई युट्युबमा प्रतिबन्ध गर्नका लागि हज्जारौं मानिसले पिटिशनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ग्रीनविचमा बस्ने २२ वर्षीया यूगेनिया कानी भिडियो ब्लगर हुन् । युट्युबमा उनका ९ लाख..
५७ सदस्यको यो परिवारको अचम्मको दीपावलीः तरकारी पकाउने प्रतियोगितादेखि बुहारी चेलीको ‘क्याटवक’ सम्म
भारतका एक परिवारले प्रत्येक वर्षको दीपावली यस्तो अचम्म तरिकाले मनाउँछन् जसका कारण यो परिवारको एक भिन्न पहिचान बनेको छ । अवधबाई साहू (७६) को ५७ सदस्यीय परिवारले आफूहरुले निकै भिन्न तरिकाले दीपावली मनाउने दाबी गर्छन् । यो निकै ठूलो संयुक्त परिवारमा १२ पुरुष, १४ महिला र ३१ बालबच्चा छन् । यीमध्ये अवधभाइका सातजना छोरा र […]
सुगाले खोल्यो पतिको परस्त्रीसँग सम्बन्धको पोल
कुवेत – कुवेतमा एक व्यक्तिलाई घरमा सुगा पाल्नु निकै महंगो परेको छ । घरमा पालेको सुगाले उनको अवैद्य सम्बन्धको पोल खोलेपछि ती व्यक्तिले कानुनी झमेला बेहोर्नु परेको छ । मिरर अनलाइनका अनुसार कुवेतमा भएको उक्त घटनामा सुगाले घर मालिक र काम गर्ने महिलाबीचको सम्बन्धको खुलासा गरेको हो । सुगाले ति व्यक्ति र काम गर्ने महिलाबीच […]
श्रीमानले घरकी सहयोगीसँग रोमान्स गर्दथे, सुगाले खोलिदियो राज
सुगाले मानिसको नक्कल गर्ने भएकाले यसलाई धेरै परिवारले पाल्ने गर्दछन् । मानिसले जे बोल्छ, त्यसलाई टपक्क टिपेर सुगाले फर्काउने पनि गर्छ । सुगा पालेको घर निकै रमाइलो पनि हुन्छ । तर कुवेतमा एक व्यक्तिलाई सुगा पाल्नु निकै महँगो साबित भयो । मिरर डट कमका अनुसार एक विवाहित व्यक्तिको घरको सहयोगीसँग अनैतिक सम्बन्ध थियो । श्रीमती [&helli..
बेहुलीले तस्बिर सार्वजनिक गरेको भन्दै विवाहको दुई घण्टाभित्रै बेहुलाद्वारा सम्बन्धविच्छेद
एक साउदी जोडीको विवाह दुई घण्टामात्र टिकेको छ । स्न्यापच्याटमा फोटो पठाएको भन्दै ती श्रीमानले आफ्नी नवदुलहीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् । उनकी श्रीमतीले विवाह समारोहको एउटा फोटो महिला साथीलाई फोटो पठाउने एपमा पठाएको थाहा भएपछि ती दुलहाले सम्बन्धविच्छेदको लागि फाइल गरेका हुन् । साउदी मिडियाका अनुसार दुबैले कार्यक्रमको तस्बिर र भ..
आफ्नो नाम ‘आइफोन सेभेन’ राख्नुहोस् र जित्नुहोस् ३२ जीबिको आइफोन सेभेन
आइफोनका लागि मानिसहरुले हद नै पार गरेको घटना विभिन्न काल खण्डमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर, अहिले जुन घटनाबारे हामी कुरा गर्दैछौं त्यसले पनि सीमा नाघेको छ । युक्रेनको एक स्थानीय खुद्रा व्यापारीले एप्पलका फ्यानहरुलाई आइफोन सेभेन सित्तैमा जित्ने अवसर दिएको छ । यसको लागि तपाईंले आफ्नो नाम ‘आइफोन सेभेन’ भनी राख्नुपर्छ । युक्रेनको सब..
हल्लिनै नसक्ने संसारकी सबैभन्दा मोटी महिला, तौल ५ सय किलो
५ सय किलोग्राम तौल भएकी इजिप्टकी एक महिला संसारकै सबैभन्दा मोटी महिला बन्न सफल भएकी छिन् । डेली मेलको खबर अनुसार इमान अहम अब्दुलाती (३६) ले अलेक्जेन्ड्रियामा २५ वर्षदेखि आफ्नो घर छोडेकी छैनन् । उनी आफ्नो खाटबाट उठ्न पनि सक्षम छैन । यहाँसम्म कि आफ्नो भीमकाय शरिरका कारण उनी हल्लिन पनि सक्दिनन् । उनी आफ्नी […]
बीएमडब्लू कारभन्दा महँगो नङ पालिस, मूल्य थाहा पाउँदा दंगदास पर्नुहुनेछ
तपाईंले अहिलेसम्म कत्तिको महँगो नङ पालिस लगाउनुभएको छ ? तपाईंमध्ये धेरैले भन्नुहोला १ हजार, १० हजार वा १ लाख । तर यदि हामीले तपाईंले यत्तिको मूल्यको नङ पालिस त निकै सस्तो हो भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्यो होला । आज हामी तपाईंलाई यस्तो नङ पालिसबारे जानकारी दिँदै छौं जसको मूल्य लाखौंमा नभई करोडौंमा छ । संसारको […]
हेडलाइन पढ्दा अचम्म र अपत्यारिलो लाग्यो होला तर यो वास्तविक हो । संयुक्त अरब इमिरेट्सका एक व्यक्तिले विवाह गरेको दुई दिनमा नै श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । पहिलो पटक श्रीमतीलाई मेकअप बिना देखेपछि उनले श्रीमतीसँग छुट्टिएर बस्ने निर्णय गरेका हुन् । यो अचम्मको घटना मनोचिकित्सक डा. अब्दुल अजिज असफले बताएका हुन् । उनको दाबी अ..
‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ सायद यो भनाई यस्तै बालकलाई वर्णन गर्नका लागि बनाइएको हो। हुन त यी बालकको उमेर ६ वर्ष हो, तर उनीभित्रको प्रतिभा कुनै वयस्क वा परिपक्क व्यक्तिको भन्दा कम छैन । यी बालक आफ्नो यहि प्रतिभाले महिनामा १ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । उनले एक ‘कुकरी सो’ गर्नुका साथै सोसल मिडियामा पनि निकै […]
९७ श्रीमती, १८५ सन्तान भएका ९२ वर्षे भन्छन्, ‘अझै दुईवटा विवाह गर्छु’
नाइजेरियाका निकै चर्चित बहुपत्नीवादीले आफ्नो मृत्युको खबरलाई अस्विकार गर्दै आफू अहिलेसम्म पनि ‘धेरै नै जिउँदो’ भएको बताउँदै ९२ वर्षको उमेर आइपुग्दा पनि श्रीमतीहरु जोडिरहने बताएका छन् । मोहम्मद बेले अबुबाकर नाइजर राज्यको बिदा शहरका निकै विवादास्पद व्यक्ति हुन् जसले १०७ महिलासँग विवाह गरेका छन् । तर उनले १० जनासँग सम्बन्ध विच्छेद ..
दुर्घटनाका यी तस्बिर हेर्दा डर लाग्दैन, हाँसो उठ्छ (१० फोटो)
एनुअल ग्लोबल रोड क्र्याश स्ट्याटिस्टिकका अनुसार हरेक वर्ष दुर्घटनामा लगभग १३ लाख मानिसहरुको मृत्यु हुन्छ । यसमध्ये धेरैजसोको मृत्यु खराब ड्राइभिङका कारण हुन्छ । दुर्घटनाका धेरैजसो तस्बिर यति भयानक हुन्छन् कि त्यो देखेर निकै डर लाग्छ । यद्यपी, यस्ता केही दुर्घटना पनि हुन्छन् जुन देखेर डर लाग्दै बरु हाँसो उठ्छ । आज हामी तपाईंलाई य..
निलो आँखा भएका पाकिस्तानका चर्चित चिया बेच्ने व्यक्तिबारे थाहा पाउनै पर्ने १० तथ्य
पाकिस्तानका अर्सद खान एकै दिनमा चिया बेच्नेबाट मोडल बने । उनले सायद सपनामा पनि सोचेका थिएनन् होला, उनी रातारात एक स्टार बन्ने छन् र यति धेरै चर्चित हुनेछन् । पाकिस्तानी फोटोग्राफर जिया खानले १८ वर्षे उनलाई इतवार बजारमा भेटिन् । उनले यो फोटो सोसल मिडियामा अपलोड गरेपछि उनी एकाएक चर्चित बने । महिलाहरु उनीमाथि फिदा […]
संसारको सर्वाधिक महँगो विवाह कार्डमा छ एलसिडी, हेर्दा दंग पर्नुहुनेछ
नेपालीलगायत भारतीयहरु विवाहलाई निकै महत्व दिन्छन् । जीवनमा एक पटक गर्ने हो भन्दै नेपाल र भारतमा विवाहमा अत्यधिक पैसा खर्च गर्ने चलन पनि छ । हो, यस्तै सोचमा रहेका एक भारतीयले आफ्नी छोरीको विवाहलाई अविष्मरणीय बनाउने हेतुले जोडतोडले तयारी गरिरहेका छन् । विवाह भन्ने बित्तिकै पाहुनाको कुरा आउँछ । पाहुनालाई बोलाउन सबैभन्दा पहिले कार्ड..
विश्वकै पिरो खुर्सानी खाँदा घाँटीमा प्वाल नै पर्यो
न्युयोर्क – हालै अमेरिकामा एक व्यक्तिले विश्वकै पिरो मानिएको घोस्ट पेपर नामक खुसार्नी खाँदा घाँटीको तल्लो भागमा रहेको खाना नलीमा प्वाल नै परेको छ । जर्नल अफ इमरजेन्सी मेडिसिनमा प्रकाशित रिपोर्टमा ती व्यक्तिको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन । जर्नलमा ती व्यक्तिले खाना खाने एक प्रतियोगितामा घोस्ट पेपर वा भुत जोलोकिया नाम गरेको खुर्सानी..
पाकिस्तानी चिया बेच्ने व्यक्तिपछि यी सुरक्षाकर्मीले इन्टरनेटमा सनसनी मच्चाउँदै
केहि दिनअघि मात्र सुपरमोडलको स्वरुप भएको इस्लामावादका चिया बेच्ने व्यक्ति इन्टरनेटमा भाइरल बनेका थिए । उनले धेरैलाई आकर्षित बनाएका थिए । इन्टरनेटको पावरले उनलाई अब चिया बेच्न दिएन, उनी एक मोडलिङ एजेन्सीमा अनुबन्धित भएर मोडल भएका छन् । उनी बारे रातोपाटीले समाचार पनि लेखेको छ । उनीजस्तै अर्का एक व्यक्ति इन्टरनेटमा ट्रेन्ड गरिरहेका..
कति खतरनाक छ समुद्र, हेर्नुहोस् तस्विर
काठमाडौं – तपाइँले कहिले समुद्रमा सयर गर्ने सोँच बनाउनुभएको छ ? बनाउनुभएको छ भने पक्कै पनि तपाइँले समुद्रको वास्तविकताको बारेमा थाहा पाउनुभएको छैन । हामीले अहिलेसम्म पूरै समुद्रको ५ प्रतिशत मात्र अध्ययन गर्न सकेका छौं जबकी यसले विश्वको ७० प्रतिशत भाग ओगट्छ । त्यहाँ यस्ता डरलाग्दो प्राणीहरु बस्ने गर्छन् र यो यति गहिरो हुन्छ हामी ..
इन्टरनेटका नयाँ सनसनी बने पाकिस्तानका यी चिया बेच्ने व्यक्ति, सुन्दरीहरु उनीमाथि फिदा
पाकिस्तानमा एक चिया बेच्ने व्यक्ति इन्टरनेटको नयाँ सनसनी बनेका छन् । यी व्यक्तिको तस्बिर सोसल मिडियामा तीब्र रुपमा भाइरल हुनुका साथै महिलाहरुमा उनीमाथि आफ्नो प्रेम दर्साउनका लागि होडबाजी गरिरहेका छन् । यी व्यक्तिलाई पाकिस्तानीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग तुलना गरेर सोसल मिडियामा ठट्यौलीसमेत गरेका छन् । यी व्यक्तिक..
एकतर्फी प्रेम दर्साउन महिलाले अपनाइन् यस्तो तरिका, भाइरल भइन् रातारात
आफ्नो प्रेम दर्साउनका लागि मानिसहरुले विभिन्न तरिका अपनाउने गर्दछन् । तर यहाँ एक महिलाले निकै अचम्म तरिकाले आफू एक युवकको प्रेममा रहेको भनी देखाएकी छिन् । उनले उठाएको यो कदमको आजकाल सोसल मिडियामा निकै चर्चा भइरहेको छ । लगभग ३० वर्षीया यी महिला पर्वतारोही हुन् र आफ्नो वास्तविक नामलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्नन् त्यसकारण उनलाई चीनियाँ..